Ogaden News Agency (ONA) – Xafiiska ONLF ee Magaalada Fiiq oo Maamul cusub doortay.
Xafiiska ONLF ee Magaalada Fiiq oo Maamul cusub doortay.
Posted by Cabdalla Cabdalla	/ July 11, 2019
Xaflad dootosho oo si wayn loosoo agaasimay oo ka dhacday magaalada FIIQ ee Xarunta Gobalka erer Soona agaasimeen hogaaminta JWXO ee heer gobal ayaa lagu soo dhisay Maamulka Cusub ee Qabanaya Xafiisyada JWXO ee Heer Gobal & heer Dagmo.
Xafladan oo ahayd mid si xamaasadaysan loosoo qaban-qaabiyay waxaa ka soo qayb galay Dhamaan Qaybaha kala duwan ee Bulshada ku dhaqan Xarunta Gobalka Erer ee Magaalada FIIQ & heerarka kala duwan ee Xubnaha JWXO ee ka hawlgala FIIQ.
Sidoo kale waxaa iyana dhankooda joogay Masuuliyiin Gole-dhaxe ee ONLF oo uu hor kacayay halgame-Cabdi-kaafi Sheekh iyagoo halkaasi kasoo Jeediyay khudbado soo jiitay dareenka kaqayb galayaashii Xaflada iyagoo ku dheeraaday adkaynta Midninada & kamidha dhalinta halgankii Xoriyad raadinta ee mudada dheer lasoo waday.
Gaba-Gabadii waxaa madashaad lagu doortay Gudiyada Maamul ee heer Gobal & heer Degmo oo midkiiba kakoobanyahay 9 Xubnood, waxaana Maamulka cusub ee ladoortay kamid ah:
1. Cali Daahir Cabdi-dheere ( XAAJI CALI DAHIR): Gudoomiyaha Gobalka ERER.
2. Yuusuf Shugri: Xoghayaha xafiiska gobalka
3. Axmad Carab: Gudoomiyaha xafiiska dagmada Fiiq
4. Cabdi sheekh muxumed: Xoghayaha xafiiska dagmada.
Gunaanadkii waxay xafladu kusoo idlaatay Jawi farxadeed oo Qurxoon isagoo loo rajeeyay maamulka cusub inuu kasoo baxo waajibaad shaqo ee loo igmaday.
ONA / FIIQ.